Real Gaming Myanmar - Page 69 of 114 - Real Gaming & Technology
ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်ပေမယ့် မဆိုးပဲလည်းမနေနိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်(၅)မျိုး
ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်ပေမယ့် မဆိုးပဲလည်းမနေနိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်(၅)မျိုး တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ချစ်သူကောင်လေးအပေါ် အမြဲတမ်းလိုလို ဆိုးကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခါတလေ နောင်တရမိပေမယ့် ချစ်သူအပေါ်မဆိုးပဲလည်း မနေနိုင်ကြပြန်ပါဘူး။ ဒီလိုကောင်မလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ …
အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို မလုပ်သင့်သည့်အရာများ (ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါသည်) (၁) ပြွတ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီး ရေမဆေးရ။ တစ်ချို့က Douching Advice (ရေပြွတ်ကဲ့သို့သော)အရာများသုံးပြီး ယောနိအတွင်းပိုင်းကို ထိုးသွင်းကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထားကြောင်း ကြေငြာထားရင်လည်း အသုံးပြုဖို့ …
ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (MAR 31.3. 2019 မှ APR 6. 4. 2019 ထိ)
ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (MAR 31.3. 2019 မှ APR 6. 4. 2019 ထိ) ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ Mar …
ဝိတ်ချသူတွေအတွက် ကြက်သားထောပတ်သီး ချဉ်စပ်ဟင်းရည်
ဝိတ် ချ သူ တွေ အ တွက် ကြက် သား ထော ပတ် သီး ချဉ် စပ် ဟင်း ရည် . …
(၅၀၀) နှင့် (၁၀၀၀) ကျပ်တန် ထီလက်မှတ် အုပ်ရေ ခြောက်သိန်းကျော် ရောင်းမထွက်ပဲကျန်
(၅၀၀) နှင့် (၁၀၀၀) ကျပ်တန် ထီလက်မှတ် အုပ်ရေ ခြောက်သိန်းကျော် ရောင်းမထွက်ပဲကျန် (၅၀၀) ကျပ်တန်ထီ ၏ (၂၅) ကြိမ်မြောက် နှင့် (၁၀၀၀) ကျပ်တန် …
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သေချာလေ့လာသင်ယူပြီး ပြန်လာသူတွေကို အားပေးအားမြှောက်မလုပ်ဘဲ အညွန့်ချိုးလိုက်သလိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကကို တဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမှုတွေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ်ကို ပုံဖော်ဖန်တီးပေးခဲ့သူကတော့ဒါရိုက်တာခရစ္စတီးနားခီဖြစ်ပြီး သက်မွန်မြင့်ကလည်း အဓိက ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဥပါယ်တံမျဉ်အဖွဲ့သားတစ်ခုလုံးဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက် နဲ့ထပ်တူ ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပြီးတော့ ပရိသတ်အားပေးမှု အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာပါ …
သက်သတ်လွတ် ထမင်းကြော် ဝါတွင်းကာလမှာ သက်သတ်လွတ် စားသုံးသူတွေအတွက် သင့်တော်မယ့် ထမင်းကြော်လေးပါရှင် ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ထမင်း ▪▪▪ ဆန် ပလတ်စတစ် ဆန်ချိန်ခွက် ၁ …
ရန်ကုန်မှာ Bus ကားစီးမယ်ဆိုရင်
ရန်ကုန်မှာ Bus ကားစီးမယ်ဆိုရင် 🚌🚎 မင်္ဂလာဈေးကို ရောက်တဲ့ နံပါတ်တွေ – ၃၊ ၇၊ ၈၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၃ ယုဇနပလာဇာကို ရောက်တဲ့နံပါတ်တွေ …
၂၀၁၉ ခုနှစ်. မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့ နံနက်(၀၆၃၀) နာရီချိန် နေပြည်တော် – မန္တလေးလမ်း မိုင်တိုင် ၂၇၈/၇ အနီး တွင် ယာဉ်အမှတ် YGN 5H-3— ISUZU …
လူစကားကို လူနားလည်​​အောင်​ လူလို​ပြော
လူစကားကို လူနားလည်​​အောင်​ လူလို​ပြော ဥပါယ်​တံမျဉ် ဇာတ်​ကားထဲမှာ သိန်းစိုးအဖြစ် သရုပ်​​ဆောင်​တဲ့ ​အောင်​မြင့်​မြတ်​က ဇဏ်​ခီနဲ့ ဆုံ​တော့ စကားတစ်​ခွန်း ဆိုတယ်​ ။ ` ခင်​ဗျား ကျွန်​​တော့်​လို …
Page 69 of 114« First...405060«6768697071»8090100...Last »